Daawo Muuqaal ka hadlaya Burburka gaaray Degmada Hodan. "Video" - Caasimada Online
Home Warar Daawo Muuqaal ka hadlaya Burburka gaaray Degmada Hodan. “Video”
Daawo Muuqaal ka hadlaya Burburka gaaray Degmada Hodan. “Video”
Muuqaalka Maanta aan Idiin soo Xuleeyno Waa Degmada Hodan oo Burbur xoogan ay ka soo gaareeyn Dagaaladii sukeeyay ee 22 sano ka dhacayay Magaalada Muqdisho Goormee ayaa kugu dambeysay aragtideeda Degmada Hodan.
Magaalada Muqdisho waayadii u dambeeyay waxeey ka soo kabaneysa burburkii gaaray waxaana xiligaan la gaaray xiligii ay dib u is taagi laheyd 22 sano kadib oo burbur iyo dagaalo sukeeyay ay ku dul habsadeyn.
HALKAAN KA DAAWO MUUQAALKA DEGMADA HODAN: